Shock njengoba isheke ukusebenza?
Kungakhathaliseki ukuthi yiluphi uhlobo ukumiswa ifakiwe, yemoto njalo wasebenzisa ukushaqeka ezidayiswayo. Lokhu Damping amadivayisi Damping kunyakaza ekumisweni emsebenzini. Umgomo we operation amadivaysi kuyinto ukuguquka amandla mechanical ku ukushisa. Hlukanisa futhi egcwele igesi-ukushaqeka ezidayiswayo. Elements sisebenze ezifana ukumiswa emikhulu iziphethu, ikhoyili iziphethu, torsion imigoqo kanye imicamelo. Nokho, njenganoma iyiphi enye ingxenye, izinqubo ukumiswa behluleka. Kuyinto ayihlukile neze futhi ukushaqeka mfutho. Indlela usihlole ngokusebenza? Impendulo yalo mbuzo, uzofunda kusuka sihloko namuhla yethu.
Kungani kubalulekile ukuqapha isimo sabo?
Umthombo lo mshini 60 ku-oda ezinkulungwane amakhilomitha. Ngezindlela eziningi, lesi sibalo incike izimo zomgwaqo. Hhayi ngaso sonke isikhathi i-mfutho ukushaqeka banakekela lokhu predetermined kathi of khathi. Nganoma yisiphi isikhathi-ke kungalimala. Ngakho-ke, kufanele siqondiswe hhayi imithetho, okungukuthi isimo idatha Damping amadivaysi. Kungani kubalulekile ukuqapha isimo sabo? Engesiyo ukushaqeka mfutho kungabangela ukungalingani isondo. Ngenxa yalokho, bafake isondo kuyoba okungafanele. Umshini uzongena ngesivinini. Futhi okuyiphutha ukushaqeka mfutho kunciphisa isisetshenziswa isondo amabombo. Zibiza ngempela eqolo. Kodwa ku izimoto eziningi kule yunithi libuthene nge ihabhu. Ngakho-ke, intengo ukulungisa kungenzeka kuze kube ama-ruble ayizigidi ezingu-20. Kodwa akugcini lapho. I kuhlulekile ukushaqeka mfutho (indlela ukuhlole, uchaze ngezansi) kwandisa braking indlela imoto. Lokhu kunomthelela ongemuhle ngokuphepha traffic. Futhi-ke, siba sibi ukugibela induduzo. Ngemva ephukile ukushaqeka mfutho ingasakwazi ukuthambisa buhlungu. Bonke adluliswa ngqo emzimbeni kanye nokumisa izingxenye, okuyinto futhi kunciphisa ukuphila kwabo inkonzo. Yingakho-ke kubalulekile ukuba abe engaphelele ukushaqeka mfutho. Kanjani ukuhlola le nto? Izindlela zingase zihluke. Cabanga ezidume kakhulu.
Indlela hlola mfutho ukushaqeka ukusebenza ngaphandle kokuba ukuyisusa imoto? Eshibhe futhi ewusizo kunazo zonke indlela - kuhlolwe ngamehlo timphawu. Dampers abasondelene iziphethu (ngezinye izikhathi ababuthelwa nabo, kokubili McPherson ukumiswa), beshayela. Sibheke isimo sabo. Isibani akufanele iminonjana amafutha namanzi amabala. Uma kunjalo, khona-ke mfutho ukushaqeka kwephulwe. Hlola isimo amasheya (bangenile isondo isimo khulula). Kungcono ukukwenza phezu lift. Uma kungekho moto jacking enjalo oyifunayo isiqondiso futhi poddevat zibhonge. Stem kumele kukhanye. Ukuba khona nokugqwala on likhuluma ukwehluleka isici. Mayelana okuyiphutha ukushaqeka mfutho kungashiwo isondo ngokwayo. Hlola isimo yimpandla. Ukwehla kwentengo kufanele zifane. Yiziphi nemibi le ndlela ukuxilongwa? Chaza inkinga ngale ndlela kungenzeka kuphela kwesigamu amacala. Phela eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa kubangelwa ukuwohloka kwamangqamuzana ukushaqeka yangaphakathi absorber izingxenye zalo. Futhi ngeke zibukeke nokuhlola. Ngaphandle, singabona kuphela phetho izinkinga - uwoyela amabala (okuyinto ngenhlanhla akubonakali njalo) futhi podedenny nomvikeli.
Hlola izakhiwo Damping
Le ndlela ukuqinisekisa ukusebenza ukushaqeka wezinciphisi esimweni ezolile. Ngakho, imoto ipakiwe emhlabathini olelezekileyo. Okulandelayo, enye yezingxenye zayo ngamandla unyakazisa izingalo futhi uhlole ngokusebenzisa lokho isikhathi umzimba uzoyeka unyakazisa. Le ndlela isetshenziswa ku izimoto. 1-2 ovunyelwe ukugcwala imijikelezo. Uma umshini uyaqhubeka "ukudlala", kusho ukuthi engaphelele ukushaqeka mfutho.
Ngaphansi kwalesi ndlela ukuthi le ndlela kuphela ukuqinisekisa yokugcina "ufile" ukushaqeka mfutho. Nokho, kuyinto eyodwa yezindlela kakhulu fast and ezishibhile (uma kungenjalo khulula) uphethwe. Into eyodwa ngaphezulu - ngaso sonke isikhathi i-mfutho ukushaqeka "sihambahamba". Ngezinye izikhathi stem is nje bagibele. Kulokhu, imoto ngeke wakwazi ukuyiqeda.
Kuthola iphutha ohambeni
Lena enye yezindlela olunembile kakhulu, okuyinto kukuvumela ukuthi ngabe mfutho ukushaqeka KULUNGILE. Kanjani ukuhlola isimo? Udinga ukuqapha ngokucophelela ukuziphatha umlingisi imoto. Sasidla umshini njalo "ngifuna endleleni", madolonzima aphendule amasondo ayo futhi senhliziyo ngesikhathi semfene kancane, yingakho Damping izakhi angene labhidlika. Ngezinye ezinkulu isici thud ungezwakala imigodi. Kodwa musa njalo bavele piston punctured. Mhlawumbe ezigugile Hob ukuthi ubamba mfutho ukushaqeka phezulu noma ezansi. Phakathi zokuxilonga isheke imoto ukuziphatha lapho cornering. Umshini akufanele kube kakhulu izithende. Uma kukhona okukodwa noma ngaphezulu izimpawu ngaphezulu, bese ukushaqeka isigugile.
Ukuze ukwazi kahle hle ukuthi yiziphi yokushaqeka wezinciphisi ezine onesici, ukusiza ahlukanisa. I element ekhishwe igibele thwi isihlobo emhlabathini. Indlela hlola ezingemuva ukushaqeka wezinciphisi? Wehlisa ingalo yakhe ikhiyiwe phansi. Izandla kuthathe ngentonga engenhla futhi idonsele, bese zicindezelé. Onesici ukushaqeka mfutho has ezinhle ukumelana amandla. Uma induku ihamba ibutho ngesandla esisodwa futhi hhayi ukungezwani ke into engaphelele. Akukhona uketshezi ngokwanele wokubacindezela, kungaba ngaphakathi emoyeni etholakalayo (ngaphandle izakhi egcwele igesi-). Indlela hlola phambi ukushaqeka wezinciphisi futhi strut? Ukuxilongwa kwenziwa ngendlela efanayo. Kwahlelwa izakhi idatha ziyafana, ngakho uma isitokwe ihamba ngokukhululeka, indlela enjalo kumelwe ithathelwe.
Akukhona njalo kungenzeka ukunquma umonakalo ngaphandle kokukhipha isici. Nokho, kukhona indlela evumela ukuthi wena ukuthola inkinga emsebenzini. Indlela hlola strut ngaphandle ukuqaqa? Ukuze wenze lokhu, imoto olusunduzelwe kuya shaker. Izindleko sevisi ruble ayizigidi 1. Ngesikhathi esifanayo thina hlola hhayi uthuthumele kuphela, kodwa futhi nezinye izingxenye ukumiswa wazihlephula uhlelo. Shaker kulingisa semfene komgwaqo, ukuvumela ukukhomba iphutha lokhu noma lokhuya indlela. Ungene futhi ohlangothini imoto kweqa (ukuze ukwazi ukuthola ukuseviswa sesondo amabombo kanye ibhola).
Ukuma ifakwe izinzwa eziningi adlulisa ulwazi ngomzuzwana ngokuzenzakalela kukhompyutha.
Plus, hlola le ndlela - ukunemba eliphezulu iphutha ukuthola esikhathini esifushane. Ngaphezu kwalokho, ngaphandle kwamasevisi ezinjalo wenze abanikazi amaloli. Phela, umshini enjalo kuphazamise izandla (njengoba indlela yesibili) akunakwenzeka. Shaker ikuvumela ukuba ukuchaza inkinga eyinkimbinkimbi. Okuwukuphela negative - kokuziphatha elincane zezitsha izungeze lo muzi. Futhi akusiwona njalo intengo kwamukelekile.
Ngakho, thina esiphethweni kanjani ukuhlola ukuseviswa we mfutho ukushaqeka ngezindlela ezihlukahlukene.
Evuthayo phambi ukubopha disc: izimbangela, izinkinga, kanye nokubuyekeza
Indlela ukunamathisela toning?
"Nissan Primera" - Izibuyekezo wabanikazi futhi incazelo ka imoto Japanese
I-porkridge ye-buckwheat ku-multivarque yinto elula kakhulu ongayipheka
Synergy - sikhona ukuze umthetho?
"Lada 2170" ( "Ngaphambi"): Ukucaciswa, ukubuyekezwa
Kwenzakalani uma Swallow ushingamu? Kugwinyiwe gum - yini okumele ngiyenze?
Yini ukuhlanganisa umbala yeminqumo Ingaphakathi
Isikebhe "iRikethe" kuma-hydrofoils: incazelo, izici zobuchwepheshe. Ukuthuthwa kwamanzi
Cerebral vasospasm - izimpawu kanye izimbangela zesifo
Owenza ukuthungela Vaz 2110 kanjani?